Myanmar Top (10) Social Chart မှာ နံပါတ်(၁) နေရာကို ရရှိခဲ့တဲ့ မူးလာ…. – Shwewiki.com
Myanmar Top (10) Social Chart မှာ နံပါတ်(၁) နေရာကို ရရှိခဲ့တဲ့ မူးလာ….
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မူးလာကတော့ လတ်တလောမှာ အောင်မြင်မှုတွေထပ်မံရရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။
အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ မူးလာက အခုလိူကိုဗစ်ကာလမှာတောင် မနားမနေသီချင်းတွေကို ဖန်တီးနေခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်ကပဲ “ကျေနပ်လိုက်ပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ထပ်မံထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းလေးကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျနေခဲ့ပြီး ဒီတစ်ပတ် Joox ရဲ့ ပရိသတ်အားပေးနားဆင်မှုအများဆုံး ရရှိတဲ့ Myanmar Top 10 Social Chartမှာ နံပါတ်(၁)နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မူးလာကလည်း အခုလို သူ့ရဲ့သီချင်းလေးနံပါတ်(၁)နေရာရရှိတဲ့အထိကို နာဆင်းအားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို “Woo Praise The Lord. မွေးလလေးမှာ ကောင်းချီး မင်္ဂလာခံစားရ၏။
ချစ်ခင်အားပေးကြသော အယောက်စီတိုင်းအပေါ် သာ၍ကောင်းချီးခံစားရပါစေ။ဆက်လက်၍ကြိုးစားပါဦးမည်”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ မူးလာရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ တကယ်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါပဲနော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ မူးလာကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြထပ္မံရရွိေနခဲ့ပါေသးတယ္။
ေအာင္ျမင္တဲ့အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ မူးလာက အခုလိူကိုဗစ္ကာလမွာေတာင္ မနားမေနသီခ်င္းေတြကို ဖန္တီးေနခဲ့ၿပီးၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေလာက္ကပဲ “ေက်နပ္လိုက္ပါ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းအသစ္ေလးတစ္ပုဒ္ထပ္မံထြက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
သီခ်င္းေလးကလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕အႀကိဳက္နဲ႔ထပ္တူက်ေနခဲ့ၿပီး ဒီတစ္ပတ္ Joox ရဲ႕ ပရိသတ္အားေပးနားဆင္မႈအမ်ားဆုံး ရရွိတဲ့ Myanmar Top 10 Social Chartမွာ နံပါတ္(၁)ေနရာကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။
မူးလာကလည္း အခုလို သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေလးနံပါတ္(၁)ေနရာရရွိတဲ့အထိကို နာဆင္းအားေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို “Woo Praise The Lord. ေမြးလေလးမွာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာခံစားရ၏။
ခ်စ္ခင္အားေပးၾကေသာ အေယာက္စီတိုင္းအေပၚ သာ၍ေကာင္းခ်ီးခံစားရပါေစ။ဆက္လက္၍ႀကိဳးစားပါဦးမည္”ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေက်းဇူးတင္စကားေျပာထားပါေသးတယ္။ပရိသတ္ႀကီးေရ မူးလာရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ တကယ္ကို ဂုဏ္ယူစရာပါပဲေနာ္။
Double Dating Program လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အသည်းယားစေခဲ့တဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲ (၂)တွဲ..
မြင်​နေကျပုံစံတွေနဲ့ကွဲထွက်ကာ ဖက်ရှင်ကျကျလေးဝတ်ပြီး အထာကျကျပို့စ်လေးတွေပေးကာ ဂေါ်လွန်းနေတဲ့ ဝိုင်းလေး..